Golaha Shacabka Oo Maanta Ku Celiyey Wasiir Beyle Miisaaniyad Uu Sheegay Iney Soo Korortay – Kalfadhi
Golaha Shacabka Oo Maanta Ku Celiyey Wasiir Beyle Miisaaniyad Uu Sheegay Iney Soo Korortay
November 12, 2018 November 12, 2018 Kalfadhi
Golaha Shacabka ayaa maanta dood adag ka yeeshay miisaaniyad uu Wasiirka Maaliyadda, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, u soo gudbiyey isla maanta Kulankii Golaha. Wasiir Beyle waxa uu miisaaniyaddaas ku sheegay iney soo korortay markii la ansixiyey miisaaniyaddii 2018-ka kadib. “Lacag baa kusoo biirtay miisaaniyadda, 17 milyan ah” ayuu maanta ka hor yiri Golaha Shacabka.
Xildhibaanada ayaa weydiistay Beyle inuu caddeeyo meesha ay lacagtaas ka soo korortay, balse kuma uusan guuleysan inuu ka jawaabo su’aashaas. Hase ahaatee, waxa uu Wasiir Beyle ku celceliyey in miisaaniyaddan, uu sheegay iney hadda heleen, ay ugu talogaleen iney siiyaan ciidan 8000 oo askari ah, oo uu yiri “dowladihii gunooyinka siin jiray baa ka jartay”.
Golaha ayaa weydiistay inuu magac dhabo ciidanka ay Wasaaraddu u qoondeysay miisaaniyaddaas. “Waxaan rabnaa in shacabka Soomaaliyeed loo caddeeyo dowladaha mushaarka goostay. Ciidamada laga goostay mushaarka ma military baa? Ma booliis baa? Ma nabad sugid baa? Mise waa asluub?” ayuu Xildhibaan Xasan Yare weydiiyey Beyle, isaga oo ka difaacayey Golaha iney diidan yihiin gunno la siinayo ciidan qaran.
Wasiir Beyle waxa uu ka gaabsaday inuu ka jawaabo inta badan su’aalihii ay Xildhibaanadu weydiiyeen, wuxuuse sheegay iney, sidoo kale, miisaniyadda uu maanta rabay in loo ansixiyo ay ku jirto shan milyan iyo bar oo Doolarka Mareykanka ah, oo uu sheegay iney uga timid Bangiga Aduunka, kadib markii ay ansixiyeen miisaanadda sanadkaan sii dhamaanaya. Sida uu ku doodayo Xildhibaan Cismaan Nuur Xaaji, miisaaniyadda waxaa wax lagu soo kordhin karaa ilaa sanadka bartamihiisa oo kaliya.
“Xeer Hoosaadka Miisaaniyadda waxa uu qabaa in ay dowladdu soo gudbin karto kabidda miisaaniyadda, marka sanad miisaaniyadeedka lagu jiro uu dhexda marayo. Qabya qoraalka kabidda miisaaniyadda waxaa ajandaha Golaha la gelinayaa marka loo soo gudbiyey Golaha toban maalin ka hor” ayuu yiri Xildhibaan Cismaan. Markaas waxa uu Xildhibaanku ku doodayaa in ansixinta miisaaniyaddaan soo korortay loo raaco sida uu qabo Hab Raaca Kabidda Miisaaniyadda Dowladda.
Xildhibaan Sareedo Maxamed Cabdalla ayaa qabta in, haddii miisaaniyaddan ay tahay gunno loogu talogalay ciidan, uusan Goluhu ka doodin, oo uu ogolaado. Waxaase taas kaga aragti duwanaa Xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble, oo isagoo sheegayaa inuu ku faraxsan yahay in ciidanka la siiyo gunnadiisa, haddana sheegay inuu jiro shaki ah in lacagtaan horay loo isticmaalay oo, sida uu sheegay, hadda la doonayo in Golaha laga sharciyeesto. “Lacagtaan ma lacago la isticmaalay baa, illeen maalin dhaweyd waxaan arkeynay Xildhibaano laga keenay Koofur Galbeed, oo la siiyey min 5000 oo Doolar e?” ayuu yiri Xildhibaan Cosoble.
Kulankii maanta ee Golaha waxaa ka soo qeyb-galay Wasiiro fara badan, oo Xildhibaano ah, kuwaas aan inta badan lagu arkin kulamada Golaha. Sida ay Xildhibaanada qaarkood ku doodayaan, waxay Wasiiradaas yimaadaan Kulamada Golaha marka ay Xukumaddu dooneyso iney Golaha wax marsiisato, hase ahaatee Wasiir Beyle kuma guuleysan maanta in loo ansixiyo miisaaniyadda uu la yimid Kulanka Golaha Shacabka. Isagoo la kaashanaya Guddiga Maaliyadda ee Golaha, ayuu Beyle markale Golaha la hor imaan doonaa miisaaniyaddan 7-aad kadib.